विहेको तयारीमा थिए सुशान्त !! - Canada Nepal-Nepal's Digital Online
नायक सुशान्त सिंह राजपुतको निधन झुन्डिएर भएको रिपोर्ट सार्वजनिक भैसकेको छ । उनै, सुशान्त अभिनित चलचित्र ‘दिल वेचरा’ जुलाई २१ बाट डिजिटल माध्यममा रिलिज हुँदैछ । हटस्टारमा यो चलचित्र रिलिज हुने र दर्शकले निशुल्क चलचित्र हेर्न पाउने बताइएको छ ।
सुशान्तको निधनपश्चात उनको योजनाको बिषयमा पनि विभिन्न खालका खबर सार्वजनिक भैरहेका थिए । सुशान्तको निधन भएको करिब २ सातापछि उनका पिताले उनी बिहेको तयारीमा रहेको बताएका छन् ।
भारतीय मिडियासँग कुरा गर्दै सुशान्तका पिताले सन् २०२१ को सुरुवातमै सुशान्तले बिहेको तयारी गरेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्–‘सुशान्तले चलचित्र रिलिज भएपछि बिहे गर्ने बताएका थिए । तर, उनले यूवतीको नाम भने मलाई भनेका थिएनन् ।’
सुशान्तको प्रेम रिया चक्रवर्तीसँग चलिरहेको थियो । सुशान्तले पछिल्लो समयमा निकै कम कुराकानी गर्ने गरेको पनि उनका पिताले बताएका छन् ।
आषाढ १४, २०७७ आइतवार १४:०४:३४ बजे : प्रकाशित
इलाम – पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको शब्द रहेको गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । इलामको सेरोफेरोलाई समेटेर पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले रचना गर्नुभएको ‘इलाम हाम्रो चियाबारी राम्रो’ बोलको गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको हो ।
इलामका बिभिन्न पर्यटकीय र प्राकृतिक ठाउँको वर्णन गरिएको सो गीतमा चर्चित गायक यम बरालको स्वर रहेको छ । मिलन तिमल्सिनाको सङ्गीत रहेको उक्त गीतको एरेन्ज दिनेश राजवाहकले गर्नुभएको छ । द पेक डिजिटल रेकर्डिङ स्टुडियोमा रेकर्ड भएको उक्त गीत डाइनामिक मल्टीमिडियाको व्यानरमा निर्माण गरिएको छ ।
गीतको निर्देशन राज केसीले गर्नुभएको छ । इलामको सन्दकपुर, माईपोखरी, कन्याम, अन्तु, इलाम चिया बगानजस्ता क्षेत्र समेटिएको गीतको भिडियोमा कृष्ण भट्टराई, प्रमोद रावल, अविषेक गुरुङ, कपिल बुढाथोकी, सन्तोष लोहार, मुकेश घतानी, पूर्णिमा थामी र आरोही श्रेष्ठले अभिनय गरेका छन् । नरेश ऐरको छायाङ्कनमा निर्माण गरिएको गीतको सम्पादन प्रकाश एसकेले गर्नुभएको छ ।
श्रावण ५, २०७७ सोमवार १०:४५:०२ बजे : प्रकाशित
‘बुलबुल’को सफलताले स्वस्तिमा खड्कालाई पार्नु सकस पारेको छ।
टेम्पो चालक महिलाका रूपमा उनले गरेको अभिनयले अपेक्षा चुल्याउनु चुल्याएको छ। तर, नेपालको फिल्म उद्योग यस्तो छ, यस्ता फिल्म दुईचार वर्षमा एकाध बार बन्छन्। अनि बजारमा चलेको फिल्म नगरी धरै छैन। तर, यिनको छनोटमा पनि चनाखो भएन भने के हुन्छ ? स्वस्तिमाले भोगिरहेकी छिन्।
‘बुलबुल’ रिलिज भएपछि उनले निश्चल बस्नेतसँग ‘घामड शेरे’ गरिन्। अहिले प्रदर्शनको संघारमा छ, ‘चपली हाइट ३’। ‘घामड शेरे’को के हालत भयो, सबैलाई थाहा छ। अब रिलिज हुन लागेको ‘चपली हाइट ३’ को हालत पनि के हुन्छ, थाहा छैन। कमसे कम स्वस्तिमालाई खास फाइदा गर्ने लक्षण छैन।
पहिला त यसको गीतले निराश बनायो। भर्खरै टिजर रिलिज भएको छ, तर यसले पनि बजारमा खासै तरंग सिर्जना गर्न सकेन। ‘प्रेम गीत ३’सँगै रिलिज हुन लागेको फिल्मको टिजरले तालीभन्दा बढी गाली नै खाएको छ। यो फिल्मको पनि सबैभन्दा ठूलो स्टार स्वस्तिमा नै हुन्। त्यसैले यदि यो फिल्म पनि चलेन भने सबैको निशानामा स्वस्तिमा नै पर्नेछिन्।
‘बुलबुल’को सफलताले स्वस्तिमा खड्कालाई पार्नु सकस पारेको छ। टेम्पो चालक महिलाका रूपमा उनले गरेको अभिनयले अपेक्षा चुल्याउनु चुल्याएको छ। तर, नेपालको फिल्म उद्योग यस्तो छ, यस्ता फिल्म दुईचार वर्षमा एकाध बार बन्छन्। अनि बजारमा चलेको फिल्म नगरी धरै छैन। तर, यिनको छनोटमा पनि चनाखो भएन भने के हुन्छ ? स्वस्तिमाले भोगिरहेकी छिन्।
आषाढ २१, २०७७ आइतवार १४:३२:५० बजे : प्रकाशित
बलिउड अभिनेत्री ज्याकलिन फर्नान्डिज अहिले सलमान खानको पनवेलस्थित फार्महाउसमा सलमानसँगै छिन् । ज्याकलिन सलमानसँग उनको फार्महाउस गएकी थिइन् तर लकडाउनका कारण उनी त्यहीँ अड्किएकी छिन् । अहिले उनले सलमानँग आफ्नो दिन कसरी बितिरहेका छन् भनेर बताएकी छिन् ।
बाम्बे टाइम्ससँग कुरा गर्दै ज्याकलिनले भनिन् ‘फार्ममा मैले घोडा सवारी गरें । पौडी खेलें । आफूलाई फिट राख्नको लागि योगा गरिरहेकी छु । प्रकृतिको बीचमा यति राम्रो कहिल्यै लागेको थिएन । यो लकडाउनले मलाई ती क्रियाकलाप गर्नको लागि धेरै सहय दिन सघाएको छ जो मलाई मन पर्छ । यीमध्ये पढ्नु पनि एक हो ।’
लकडाउनमा ज्याकलिन नजिकका साथीहरुसँग छिन् तर मातापितालाई मिस गरिरहेको बताएकी छिन् । ज्याकलिनले भनिन् ‘यसअघि उहाँहरुसँग धेरै टचमा हुँदिनथें । तर अहिले म भर्चुअल रुपमा उहाँहरुसँग समय बिताइरहेकी छु ।’ यसका साथै ज्याकलिनले आफ्ना बिरालोहरु पनि मिस गरिरहेकी छिन् जो मुम्बइमा उनको घरमा छन् ।
बैशाख २४, २०७७ बुधवार १४:३७:०० बजे : प्रकाशित
मजदुरहरुलाई क्वारेन्टाईनबाटै सलमान खानको सहयोग (भिडियो सहित)
लकडाउनको कारण सबैजना घरमै बस्न बाध्य छन् । यो महामारीसँग विश्व जुधिरहेका बेला बलिउड अभिनेता सलमान खानले आफ्नो फार्म हाउसबाटै मजदुरहरुलाई सहयोग गरिरहेका छन् । उसो त लकडाउनका कारण् उनी स्वयं पनि आफ्नो पानबेल फार्म हाउसमै थुनिएका छन् ।
समाजमा केहि गर्नुपर्ने दायित्व रहेको भन्दै उनी स्वयं सहभागी भएर रासन पानी र आवश्यक खाद्य सामग्री वितरण गरेका छन् ।
लकडाउनसँगै उनको फार्ममा अभिनेत्री ज्याकलिन फर्नान्डेज र उनकी प्रेमिका लुलिया वन्तुर पनि सँगै छन् ।
बैशाख २४, २०७७ बुधवार १४:३४:५० बजे : प्रकाशित
कोरोनाको कहरमा बेखबर छन् नायक अनमोल !!
अहिले संसारभरका नागरिक कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संत्रासमा छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएका सबैजसो देशमा जोखिम कम गर्न लकडाउन गरिएको छ ।
लकडाउन भएका मुलुकका सेलिब्रेटीहरु आफ्ना शुभेच्छुकलाई संयमित हुन र आफ्नो स्वास्थ्यको ध्यान दिनका लागि विभिन्न माध्यमवाट जागरण गरिरहेका छन् । नेपालकै परिप्रेक्षमा हेर्ने हो भने अधिकांश सेलिब्रेटी र सेलिब्रेटी हुन लागेका ब्यक्तिहरुले कुनै न कुनै माध्यमको प्रयोग गरेर जागरण फैलाउने काम गरिरहेका छन् । तर यो बिषयमा नेपालका एक चर्चित अभिनेता भने सरकारले लकडाउनको समय तेस्रो पटक बढाउदा पनि मौन नै बसिरहेका छन् ।
लकडाउनको समयमा सर्वसाधारण झैं अभिनेता अनमोल केसी पनि घरमै बसिरहेका छन् । उनका फ्यानहरु उनी के गर्दैछन् भन्ने विषयमा जान्न इच्छुक रहेका छन् । तर उनले लकडाउनको समय कसरी काटिरहेका छन् भन्ने बिषयमा आफ्ना प्रसंशकलाई भेउ नै दिएका छैनन् । यो विषयमा अनमोल मौन भएपछि मिडियाले पनि उनको वारेमा जानकारी लिने प्रयास गरेपनि उनी संचार सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । संसारभरका सेलिब्रेटीले आफ्ना फ्यान र शुभचिन्तलाई चिन्ता मुक्त गराउने प्रयास गरिरहदाँ अनमोल केसीले केही नगरेको देखेर उनका प्रशंसकलाई उल्टै उनको वारेमा चिन्ता पर्न थालेको छ ।
बैशाख २४, २०७७ बुधवार १४:३१:५० बजे : प्रकाशित
बलिउडका यी स्टार जो ऐना हेर्न रुचाउदैन्न, यस्तो छ उनको वास्तविक कारण !!
सिनेमा क्षेत्रमा ग्ल्यमरको निकै भूमिका हुने गर्दछ, प्राय कलाकारहरु लगभग सबै कलाकार विश्व भर नै आफ्नो सुन्दरता या आफु कस्तो देखिएको छु भन्ने उत्सुकका कारण ऐना हेर्ने गर्दछन तर बलिउडका एक स्टार जोन अब्राहम भने यस विषयका विपरित ठहरिएका छन् । बलिउडमा सिने जगतमा सुगठित शरीरले जानेमाने हस्ती हुन् जोन तर ऐना हेर्ने विषयमा भने जोन आफु पछाडी रहेको बताए ।
भारतीय टेलिभिजन कार्यक्रम ‘दि कपिल शर्मा शो’ मा जोनले उक्त अफबाह साँचो रहेको बताएका थिए । आफ्नो शरीर या मुहारमा ऐनामा हेर्नाले विभिन्न कमि कमजोरी देखिने र मनोचिन्तन रहने भन्दै जोन आफु ऐना हेर्न नरुचाउने बताएका थिए । प्राय जोन नयाँ पहिरनमा समेत खास सोख नराख्ने समेत उक्त शोमा बताएका थिए ।
बलिउडका सुपर बडी विल्डर कलाकारको यो बानी भने अनुकरणीय छ तर सिनेमा क्षेत्रमा ऐना नहेर्नु कल्पना योग्य भने छैन । जोन प्राय फिल्म शुटिंगमा समेत एकै पटक या कहिले काहिँ ऐना नै नहेरी नै आफ्नो सेटमा जाने गरेको समेत बताए ।
बैशाख २४, २०७७ बुधवार १४:२७:४१ बजे : प्रकाशित